फोहर पानी पिउन बाध्य बन्दै ग्रामीणबस्तीका बासिन्दा
रासस प्रकाशित: २०७४-१२-८ गते | 1113 पटक हेरिएको
डडेल्धुरा। सुख्खायाम लागेसँगै मूलसुक्न थालेपछि फोहर पानी पिउन बाध्य बनेका छन् डडेल्धुराका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा । जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा खानेपानीको पाइपमा पानी कम आउन थालेपछि खोलानाला वा कुवाको फोहर पानी पिउन बाध्य बनेका हुन् ।
लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका नवदुर्गा गाउँपालिका– १ सुनकोटका बासिन्दा खोलानालाको फोहर पानी प्रयोग गरी रहेको बताउनुहुन्छ । नवदुर्गाको सुनकोट जस्तै अजयमेरुको हाट, अमरगढीको हतर्कालगायतका ठाउँमा खानेपानीको समस्या भोगिरहेका छन् ।
हिउँद नसकिँदै पानीको समस्या आइपरेको र खोलानालाको पानीको भरमा खानेपानीको गुजरा चलाइरहको सुनकोटका लक्ष्मी विकले बताउनुभयो । दुई सय भन्दा बढी परिवार रहेको सुनकोट गाउँमा बिहान सबेरै उठ्नसक्यो भने खानेपानी पाउने गरेको र नत्र खोलाको फोहरपानीले नै खाना र अन्य कुराका लागि जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनकोटका अर्का महिला राजु भुलले दुखेसो पोख्नुभयो ।
कोटेली गाउँमा नै खानेपानी समस्या रहेको भए तापनि दलित बस्ती रहेको सुनकोटमा खानेपानीको बढी समस्या हुने गरेकोे स्थानीय कलावती भुलले बताउनुभयो । घरको एकजनाले पानी भर्नमा नै दिन बिताउनुपर्ने भएकाले प्रायः बालबालिका पानी भर्नका लागि घरमा नै बस्ने गरेको स्थानीयवासीले जानकारी गराएका छन् ।
दुई सय भन्दा बढी परिवारले खानेपानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासी लक्ष्मी विकले बताउनुभयो ।
धेरैजसो बालबालिका विद्यालय नगएर पानी बोकिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । पानीका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने वा दुई तीन घण्टाको बाटो हिँडेर खोलाको पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासी धर्म विकले बताउनुभयो ।
नुहानका लागि समेत पालो कुर्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । शौचालय र अन्य सागपातका लागि सिँचाइ सुविधा नभएको स्थानीयवासीले जानकारी गराएका छन् । स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि आएपछि खानेपानीको समस्याबाट मुक्त हुने आशा बोकेका सुनकोटका सर्वसाधारण फेरि आफ्ना दुःख उस्तै रहेको बताउँछन् ।
सुनकोटलगायत साविको कोटेली गाविसका धेरै गाउँ खानेपानी समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । मूलको विवादका कारण पानी समस्या भएको तर हाल समाधान भएको र अब चाडैं खानेपानी लगायतका योजना सञ्चालन हुने स्थानीयवासी समाज सेवी टेकबहादुर ऐरले बताउनुभयो ।
सुख्खायाम लागेसँगैं ग्रामीण भेगमा पानीका मूलसुकेर जान थालेपछि खानेपानी समस्या देखिन थालेको हो । जथाभावी जंगलकोबिचबाट सडक खन्दा मूलसुक्न थालेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । पानीका मूल तथा खोलानालामासमेत पानी कम हुन थालेपछि डडेल्धुरालगायत पहाडी भेगका गाउँबस्तीमा पानीको समस्या देखिन थालेको हो ।
काठमाडौं – प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुबाट गम्भीर लापरबाही भएको ठहर गरेको छ। एआइजी धिरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा गठित छा..
जोशीमाथि महाभियोग लगाउने विषयलार्इ लिएर काँग्रेसले नेकपा सचेतक देव गुरुङलार्इ टार्गेट गरी सदनमै दियो यस्तो चेतावनी!
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि महाभियोग लगाउने विषयलार्इ लिएर सदनमै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० लाई सचेत गराएको छ । काँग्रेसले..
सिके राउतको टाउको काटेर फुटबल खेल्छु भन्ने यी नारीलाई आयो यस्तो कडा चेतावनी, सावित्रिको उड्यो होस !
काठमाडाैं । बलात्कारिलाई फासीको सजाय माग गर्दै सडकमा चर्का भाषण गर्दै आन्दोलनमा उत्रने सावित्रि सुवेदीले सिके राउतको टाउको काटेर फुटबल खेल्ने भन्दै गरेको कुरालाई लि..
पोर्न साइट बन्द गर्ने कुराले मुख्यमन्त्री गुरुङ र बाँस्कोटाबीच भनाभन, गुरुङले सरकारलाई दिए यस्तो चेतावनी !
काठमाडाैं । सरकारले नेपालमा बलात्कार तथा महिला हिंसा बढाउनमा एडल्ट फिल्म 'पोर्न'को भुमुका रहेको भन्दै यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकणलाई निर्देशन दिएक..